तिथि मेरो पत्रु » 10 एक Bodacious कानूनी पैड बनाउन को तरिका!
"घर जस्तै कुनै ठाउँ छ।"—अज को विजार्ड
तपाईं केटासित चाहे अनलाइन, लामो दूरीको, वा गोप्य एक कार्यालय रोमान्स मा जोडतोडले छन्, आफ्नो प्रेम कहानी लागि अन्तिम "सेटिङ" आफ्नो ठाउँमा हुनेछ.
अनि यो जस्तै वा छैन, आफ्नो घर, घर, वा shack, तपाईं आफ्नो पहिचान हो र जो बारेमा धेरै कुरा बताएको. बस लुगा जस्तै, यो आफ्नो व्यक्तित्व र जीवनशैली भोल्युम संचार.
तपाइँको तपाईं के भन्नुहुन्छ?
तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाइँको तपाईं विवाह भौतिक छौं भन्न, वा बाहिर झुन्डिएको र राम्रो चिन्नुको को न्यूनतम कसैले योग्य, यी समसामयिक सुझाव विचार.
सजाय DO छ र Don'ts
1. आफ्नो ठाँउ एक अद्वितीय गर्छन्, तिमी को हो को रोचक प्रतिबिम्ब.
यो सनकी होस्, पुरानो जमानाको, साहसी र Bodacious वा, यो आफ्नै स्पिन राखे.
त्यो आफ्नो स्थान भएको सुन्दरता हो: आफ्नो अन्तरिक्ष, आफ्नो स्वाद!
तपाईं संग आउन सक्छ के हेर्नुहोस्. विभिन्न रंग संयोजन प्रयास, शैली, textures, र पनि काल. प्रारम्भिक चरणमा, तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व र जीवनशैली मिल्दो के पक्का छौं सम्म मुद्रा को एक धेरै लगानी छैन.
3. रंग को मनोविज्ञान विचार.
तपाईँ निश्चित रंग तपाईं महसुस कसरी असर र एक विशेष कोठा वा सेटिङ मा सोचेका थाहा? उदाहरणका लागि, बेज र पृथ्वी टोन रंग शान्त छन्; रातो र सुन्तला जस्तै रंग स्फूर्तिदायी बेला. व्यापार निश्चित वांछित प्रतिक्रियाहरू उत्पादन मा रंग चिकित्सा सबै समय प्रयोग. तिमी चाहिए पनि.
4. राम्रो र चिटिक्क परेको आफ्नो क्वार्टर राख्नुहोस्.
तपाईंको आमा सही थियो. मात्र यो अभ्यास विपरीत सेक्स संग एक अनुकूल प्रभाव सिर्जना गर्न योगदान गर्छ, यो तपाईं समय र पैसा बचत तिर लामो बाटो जान्छ.
5. "ब्लूम तपाईं लगाए छौं जहाँ।"
घर भित्र प्रकृति को एक बिट ल्याउने सधैं एक स्मार्ट कदम छ. वनस्पतिहरू न्यानोपन र सान्त्वना वातावरण सृजना. तिनीहरू पनि राम्रो हावा गुणवत्ता प्रदान गर्न मदत. तपाईं एक "हरियो औंठी जन्मेका थिएनन् तापनि,आफ्नो घरपालुवा जनावरको भन्दा "कोरीबाटी" कम आवश्यकता हो कि बिरुवाहरु को विभिन्न प्रकार हो ". Clueless? गुगल "सजिलो बढ्दै बोट" वा मदत लागि आफ्नो स्थानीय होम डिपो बगैंचामा विभाग भ्रमण.
6. बास्केट को बहुमुखी विचार.
म बास्केट प्रेम! तपाईं पनि. तिनीहरूले सस्तो हुन्छ, आकर्षक, र सजिलो गर्न.
भण्डारण लागि तिनीहरूलाई प्रयोग: पाल्तु जनावर खेलौनाहरू पकड, तौलिया, सिडी, स्वाद चाय, अथवा सजावटी कला टुक्रा भित्ताहरू रणनीतिक राखिएको. मिक्स र विभिन्न रंग म्याच, अधिकतम प्रभाव लागि आकार र बुनाई पैटर्न.
7. तपाईं प्रेम कुराहरू संग यो Surround.
तपाईं एक संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यो एक गिटार वा ड्रम हुन सक्छ. यो राम्रो हुन सक्छ, सजावटी कि "घर" आफ्नो परिवार वा पाल्तु जनावर र फोटो फ्रेम. तपाईं यात्रा गर्न प्रेम भने, सायद तपाईं टाढा-टाढा ठाउँमा र एक दुनिया वा दुई चित्रहरू प्रदर्शन सक्छ. यस जोडें, केही सुगंधित मोमबत्ती, वा एक शान्तिले इनारमा, एक राम्रो परिष्करण स्पर्श लागि.
8. बेडरूम र भान्सा बेवास्ता नगर्नुहोस्.
धेरै दम्पतीले खाना बाँडेर समय को एक ठूलो सम्झौता खर्च जहाँ यो हो, मजा, र स्थायी सम्झनाहरु बनाउन.
9. सबै भन्दा राम्रो सौदहरुको लागि ठाँउबाट को एक सरणी मा पसल.
तपाईं आफ्नो स्थानीय परिवार डलर जस्तै ठाउँमा केही ठूलो आइटम स्कोर गर्न सक्छन्, गुणस्तर बचत स्टोर, सम्पत्ति बिक्री र पिस्सू बजार, र पनि Craigslist.
10. पहिले र चित्र पछि लिन पक्का हुनुहोस्.
यो 'तपाईं उपलब्धि र खुशी को एक महान भावना दिनेछु, भविष्य संवर्द्धन र उपयोगी विचार.
क्षितिज मा वसन्त सफाई संग, धेरै माथि आफ्नो स्थान हटाउन र कुनै राम्रो समय छ!